Feather နှင့်အတူခေတ်ပြိုင်ထောင့်ဆိုဖာ - Two & Three Seater
အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည့်ဆိုဖာတွင်ဘယ်ဘက်ခြမ်းနှင့်ညာဘက်ခြမ်းဆိုဖာတို့ပါ ၀ င်သည်. ၎င်းတွင်လည်းရရှိနိုင်သည်2ထိုင်ခုံ3ထိုင်ခုံ. အမှန်တကယ်ဇိမ်ကျသောဒီဇိုင်းဖြစ်သောထိုင်ခုံနှင့်နောက်ခံကူရှင်တွင်အမြှုပ်များဖုံးအုပ်ထားသောအမွေးအတောင်များစွာရှိသည်.
အမျိုးအစား: Room ည့်ခန်းသုံးဆိုဖာပရိဘောဂ; ဟိုတယ် Suite; ဟိုတယ် lob ည့်ခန်း; Feather-down Sofa,
ပစ္စည်း: သားရေ; Feather; အထည်; Chrome legs; သစ်သားအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ; Soft foam
အသွင်အပြင်: ခေတ်သစ်; အမေရိကန်ပုံစံ
ထုတ်ကုန်အမည်: Modern Couches for Small Spaces, Century Sofa, Mid Century Sectional Sofa, Modern Furniture Outlet, Mid Century Modern Furniture for Sale
function ကို: Sectional Sofa with Chaise
အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 326L*224W*78H; စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား